इन्फोग्राफिक: २१ सामाजिक मिडिया तथ्या That्क जुन प्रत्येक मार्केटरले २०२१ मा थाहा पाउनु पर्छ Martech Zone
कुनै श doubt्का छैन कि मार्केटिंग च्यानलको रूपमा सामाजिक मिडियाको प्रभाव प्रत्येक वर्ष बढ्छ। केहि प्लेटफर्महरू देखा पर्छन्, जस्तै टिकटोक, र केहि फेसबुकको जस्तो रहन्छन् जसले उपभोक्ता व्यवहारमा प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउँदछ। जहाँसम्म, व्यक्तिहरू सोशल मीडियामा प्रस्तुत गरिएको ब्रान्डको ब्यबहारको साथ, बजारहरूले यस च्यानलमा सफलता प्राप्त गर्न नयाँ दृष्टिकोणहरू आविष्कार गर्नु पर्छ।
त्यसकारण कुनै पनि बजार व्यवसायीका लागि सबैभन्दा नयाँ प्रवृत्तिमा नजर राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। हामी मा YouScan तपाईंको लागि यो कार्य सरल बनाउने निर्णय गरे र इन्फोग्राफिक समावेश गरे त्यस्ता तथ्य र तथ्या statistics्कहरू समावेश भएको मन पराइएको विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू विभिन्न प्लेटफर्ममा, उपभोक्ता व्यवहार अनलाइन, विभिन्न प्लेटफर्महरूमा संलग्नता तुलना।
सामाजिक मीडिया भिडियो सांख्यिकी:
२०२२ सम्ममा, सोशल मीडियामा सबै सामग्रीको% 2022% प्रस्तुत गरिनेछ भिडियो.
ब्रान्डको %१% पहिले नै छ भिडियोहरू प्रयोग गर्दै इन्स्टाग्राममा छविहरूको सट्टा।
Of 34% पुरुष र %२% महिलाहरू खोजी गर्दैछन् शैक्षिक भिडियोहरू.
%०% प्रयोगकर्ताहरू अधिक हेर्न चाहन्छन् ब्रान्डेड स्ट्रिमहरू.
Of२% प्रयोगकर्ताहरू हेर्न मन पराउँछन् 5-6 मिनेट भिडियो प्लेटफर्ममा निर्भर गर्दै।
सामाजिक मीडिया सामग्री तथ्याistics्क:
Of 68% प्रयोगकर्ताहरू फेला पार्दछन् ब्रान्डेड सामग्री बोरिंग र अपील छैन।
सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको% 37% फिड खोज्दै स्क्रोल गर्दै समाचार। Of 35% प्रयोगकर्ताहरू खोजी गर्दैछन् मनोरञ्जन.
मिम्स लोकप्रियतामा इमोजी र GIF लाई पछाडि पार्यो र अब प्राथमिक संचार उपकरण अनलाइन हो।
मनोरन्जन सामग्री को उपयोग गर्न को लागी नम्बर १ कारण हो टिक टक.
सामाजिक मीडिया उपभोक्ता र श्रोता तथ्या :्क:
85% of टिक टक प्रयोगकर्ताहरू पनि प्रयोग गर्छन् फेसबुक, वा% 86% को twitter दर्शकहरु पनि सक्रिय छन् इन्स्टाग्राम.
विश्वव्यापी 45 worldwide% प्रयोगकर्ताहरू सोशल मीडियामा ब्रान्डहरू खोज्न भन्दा बढी सम्भावित छन् खोज इन्जिन.
Of 87% प्रयोगकर्ताहरू स्वीकार गर्छन् कि सोशल मिडियाले एक बनाउन तिनीहरूलाई मद्दत गर्‍यो खरीद निर्णय.
Of 55% प्रयोगकर्ताहरूसँग छ सिधै सामानहरू किन्नुहोस् सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरूमा।
सामाजिक मीडिया प्रभावकारी तथ्याistics्क:
प्रत्येक $ १.०० को साथ सम्बन्ध निर्माणमा खर्च भयो प्रभावकारी औसत $ 5.20.२० फर्काउँछ।
50% of twitter प्रयोगकर्ताहरूले कहिले पनि प्रभावकारीको ट्वीटमा संलग्न भए पछि केहि खरीद गरेका छन्।
Of१% प्रयोगकर्ताहरू बनाउँछन् खरीद निर्णय सामाजिक नेटवर्कमा प्रभावकारी सिफारिशहरूमा आधारित।
माइक्रो-प्रभावकर्ताहरू टिकटोकमा १ 17.96..3.86%%, इन्स्टाग्राममा 1.63%, र यूट्यूबमा १.4.96% को स rates्ग्रह भएको थियो, जसले मेगा-प्रभावकर्ताहरू भन्दा बढी सगाई उत्पन्न गर्‍यो जुन टिकटोकमा 1.21%%, इन्स्टाग्राममा १.२१% र युट्यूबमा ०.0.37% रहेको छ।
सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म तथ्याistics्क:
Ik 37% टिकटोक प्रयोगकर्तासँग छ घरेलु आम्दानी $ 100k + वार्षिक
Rs०% किशोर किशोरीहरुको भरोसा छ YouTubers तिनीहरू पछ्याउँदै छन्, कुनै पनि अन्य सेलिब्रेटीहरू भन्दा बढी।
6 10 बाहिर यूट्यूब प्रयोगकर्ताहरू कुनै पनि टिभी होस्ट वा अभिनेता भन्दा भ्लगरको सल्लाह अनुसरण गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ।
एक उत्पादन मा रुचि मानिसहरुको %०% किन्न यो YouTube मा समीक्षा हेरेपछि।
२०२० मा, संलग्नता दर सक्रिय भयो इन्स्टाग्राम .6.4.।% ले वृद्धि भयो। एकै साथ इन्स्टाग्राम फिडमा पोष्टहरूको स falling्ख्या घट्दै छ: धेरै ब्रान्डले थप कथाहरू पोष्ट गर्न स्विच गरेको छ।
YouScan उद्योगको अग्रणी छवि मान्यता क्षमताको साथ एक एआई-संचालित सोशल मीडिया मिडिया बुद्धि मंच है। हामी व्यवसायहरूलाई उपभोक्ता विचारहरू विश्लेषण गर्न, कार्यवाही अंतर्दृष्टि पत्ता लगाउन, र ब्रान्ड प्रतिष्ठा प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछौं।
टैग: 2021सिस्कोफेसबुकइन्स्टाग्राममेगा प्रभावकर्ताmegainfluencerमाइक्रो-प्रभावकर्तामाइक्रोइन्फ्लुएन्सरसामाजिक मिडिया तथ्यहरुसामाजिक मिडिया इन्फोग्राफिकसामाजिक मिडिया तथ्या .्कसामाजिक मिडिया तथ्या .्कटिक टकtwitterभिडियो ब्लगिंगvloggingहामी सकेल छौंyouscanYouTubeyoutuber
इलेना Teselko मा सामग्री प्रबंधक हो YouScan। उनीसँग मार्केटिंग र सञ्चारमा years बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ, एक विज्ञापन एजेन्सी, आईटी कम्पनीहरू, र मिडियामा काम गर्ने सहित।